SuperTuxKart waxay yeelan doontaa matoor sawiro cusub ah | Laga soo bilaabo Linux
SuperTuxKart waxay lahaan doontaa matoor sawiro cusub
De Super Tux Kart wax badan in la sheego, in Laga soo bilaabo Linux ya waan wada hadalnay ku filan oo ah kulankaan aadka u fiican ee noqda bedelka Mario kart o Shil Bandicoot.
Waxaa soo baxday in by bartiisa Waxaan baranay in ciyaartan balwada leh ay heli doonto matoor cusub oo muuqaal ah, kaas oo si dabiici ah u hagaajiya muuqaalkiisa iyo khibradiisa isticmaale. Fiidiyowga muuqaalka ayaa ka hooseeya, laakiin ma leh tayada loo baahan yahay si loo arko hagaajinta:
Tusaale sawirro ah SuperTuxKart cusub
Taasi waa sababta barta ay nooga tageen sawirro qaarkood, oo aan hoos dhigay:
Hooska cusub ee Runway-ka Shukulaatada.
Jidka Blackhill Mansion waa la hagaajiyay
Qaybta kale ee raadadka shukulaatada
Nalalka Miinada Hore
Adduun cusub oo isku xiran iyo qaab cusub ayaa sidoo kale la bilaabay in la abuuro. Tani waxay caawin doontaa hal-abuurka dadka waxayna kordhin doontaa isku-xirnaanta ka dhexeysa tareennada.
Kooxdu waxay aad ugu mashquulsanayd ku darista ukunta Easter iyo tixraacyo kala duwan oo qarsoodi ah oo ku saabsan tilmaamaha, kuwaas oo ay tahay in si faahfaahsan loo raadiyo maxaa yeelay mararka qaarkood way qarsoon yihiin, laakiin halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah sawirrada xogta aad ka heli karto:
Nolok Industries, waa shirkad male-awaal ah.
Koodhka Sara ee Hubka
Paulo Costa, madaxweynaha Val Verde, dal khayaali ah oo ku yaal Koonfurta Ameerika
Sidaad dareentayba, qaabka ayaa waxyar iska beddelay: SuperTuxKart hadda waxay kasoo muuqan doontaa midabbo dhalaalaya iyo inta badan qaabab gacmeed lagu rinjiyeeyay.
Waxaa jira hawlo badan oo badan in la qabto. Mashiinka cusub ee naqshadeynta ayaa isbeddello ku yimid raadadka, sidaa darteed weli lama oga haddii ay wax ka beddeli doonaan kuwa jira ama ay ku dari doonaan waddooyin cusub. Waxay sidoo kale noogu sheegaan baloogga in aysan jirin baahi loo qabo in laga walwalo haddii aan haysanno kaararka fiidiyowga oo xoogaa duug ah, maadaama ay ka shaqeynayaan sidii SuperTuxKart ay si habsami leh uga shaqeyn lahayd qalab kasta.
Nasiib darrose garan mayno taariikhda la sii deyn doono nuucaan cusub, markaa waa inaan sugnaa. 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Ciyaaraha » SuperTuxKart waxay lahaan doontaa matoor sawiro cusub
29 faallooyin, ka tag taada
SIII !!!!!!! Wanaagsan .. .. ..maxaa war wanaagsan ..: D .. .. horeba way u fiicnayd, wayna sii hagaajinayaan ..
Ku jawaab rawBasic
Waxaan sidoo kale u dhacay sidii baaldi biyo qabow ah oo beddelaya mishiinka sawirada. Waxaan mar horeba rabay inaan arko inay noqoto mid laga heli karo Steam.
Ku saabsan Paulo Rivera iyo waddanka Val Verde…. Miyaanay ahayn kaftan arxan daran oo loo wajahayo Venezuela? (Waxaan sharad ku leeyahay @nano wuu ku qosli doonaa faahfaahintaas).
Sikastaba, waxaan ku tijaabin doonaa netkeyga (Waan ka caajistay isku dayga inaan ku ordo Steam la'aan PulseAudio).
Valverde waa tallaabo kasta oo Caribbean ah, waa maxay sababta Venezuela?
Jamhuuriyadda Val Verde? Waxaan leeyahay dad aqoon u leh magacaas hee
Qof ii cadeeya waxa disstro, barnaamij ama maya, waan ogahay waxa ay tahay Sara
Waxaan u maleynayaa Sara inay tahay dabeecadda cusub, gabadha sawirka ku jirta barafka 😀
Waa hagaag markaa waa dabeecad ciyaar asal ah
Raphael Mardechai dijo
Maya, iyadu waa mascot 'OpenGameArt.org'.
Jawaab Rafael Mardojai
Oo waliba waxay ka muuqataa ciyaarta .. Xaqiiqdii, waxaa lagu arkaa mid ka mid ah sawirrada boostada 😉
Dabcan, waxaan ula jeeday inuusan aheyn dabeecad asal ah ciyaarta.
O_O… ku farax mashiinka sawirada ee cusub, hadda waa run ahaantii soo jiidasho leh in la fiiriyo
Noocyadii hore waxay umuuqdeen kuwo loo sameeyay kiniiniyada Android. Hadda, waxay umuuqataa ciyaar PC wanaagsan.
Waxaan jeclaan lahaa inaan arko ciyaarta iyadoo la adeegsanayo matoor sida Source ama Midnimo, laakiin taasi waxay meesha ka saari doontaa xaqiiqda inay lacag la’aan tahay.
Ku jawaab edo
Jarmal Alvarez dijo
Shaki la'aan dib u cusbooneysiin lagama maarmaan ah, in kastoo aan rajeyneyno in shuruudaha aysan cirka isku sii shareerayn.
Shaqo weyn nimankani waxay qabtaan si ay noo keenaan noocyo, aad iyo aad u dhammaystiran oo ku saabsan ciyaartan tartanka muhiimka ah
Jawaab Germán Álvarez
Mishiin cusub oo fiisigis ah oo dhameystiran lahaa 🙂
Tan iyo markii aan ogaaday waxaan bilaabay inaan raaco keydka mashiinka (kaas oo ku yaal Github, sawirada, ugu yaraan kuwa culus, waxay ku sugan yihiin Sourceforge) iyo maalin haa, iyo maalin sidoo kale waan aruurinayaa.
Runtu waxay tahay inaan u baahday, taas, iyo inay taageerto ulaha analogga iyo hagaajinta wadista, taas oo mararka qaar runta uga tagta in la doonayo.
Haddii ay tahay Steam, waan ciyaarayaa.
shini kire dijo
Way fiicnaan laheyd !!! Xitaa waan ku deeqi lahaa! xD
Ku jawaab shini-kire
Akhbaar aad u wanaagsan, ciyaartan waa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad wiilkayga.
Akira kazama dijo
Waxay umuuqataa mid aad ufiican mishiinka cusub inkasta oo dayaxu xilliyada qaar u egyahay ileys fudud.
Jawaab Akira Kazama
Peazo wuxuu bedelaa mashiinka sawirada, laakiin wuu ogaa inuu yahay kan Linux waxaan u maleynayaa inay tahay ciyaar caadi ah oo hada loogu talagalay daaqadaha. Waxay umuuqataa in tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ay unoqoneyso ciyaarta
Ku jawaab ianpocks
Aad u fiican! masraxa habeenkii!
Waa ciyaar weyn oo xiiso badan. Waan jeclahay wadada beerta, gaar ahaan hehe heesaha.
Ku jawaab Joaquin
Chicxulub Kukulkan dijo
Waxaan aqriyay in nidaam dhowaan la hirgaliyay oo ogolaaday abuuritaanka wadiiqooyin laga furo OpenStreetMap. Isbeddelka mashiinka sawirada ma saameyn doonaa muuqaalka la soo sheegay?
Jawaab u bixi Chicxulub Kukulkan
Waa maxay fikrad fiican, in magaalooyin la abuuro sidoo kale.
Kaliya waxaan dhihi doonaa kani wuxuu calaamad u yahay kahor iyo kadib kulankaan
Ku jawaab nemecis1000
Maxaan kuu sheegi karaa .. Bravo ugu dambeyn ciyaar bilaash ah oo qurux badan waxaan rajeynaynaa inay sidan ku sii socdaan laakiin la socota codsiyada with
Ku jawaab PAUL
Wanaagsan tan iyo markii aan haysto pc leh Geforce 7025 muuqaallo isku dhafan oo ay ogyihiin inay ukun tahay in lagu rakibo Linux ... dhowr jeer ayaan soo dejiyey laakiin ma ordo :), waxaan rajaynayaa inay kani yahay kii ugu dambeeyay.
Eduardo Madiina dijo
Ciyaartaani waxay ku bilaabi laheyd qaab khadka tooska ah, waxaan rajeyneynaa inay ku jiraan.
Jawaab Eduardo Medina
Paul Costa waa Chavez, kaliya wuu kayaryahay
Ku jawaab kevinjhon
Madsonic: Ku rakib Server Server Streaming Streaming on Raspberry Pi
BOINC ama sida loogu deeqo ilaha kombiyuutarkaaga si loogu baaro mashaariicda